6 Best Practices N'ihi na-abawanye The nloghachi na itinye ego (ROI) nke gị Email Marketing | Martech Zone
Mgbe ị na-achọ ọwa ahịa nke nwere nloghachi na-akwụsi ike na nke a ga-ebu amụma na itinye ego, ị naghị ele anya karịa ahịa email. Ewezuga ịbụ ezigbo njikwa, ọ na-enyekwa gị azụghachi $42 maka $1 ọ bụla emefuru na mkpọsa. Nke a pụtara na ROI gbakọọ nke ahịa email nwere ike iru opekata mpe 4200%. Na blọọgụ a, anyị ga-enyere gị aka ịghọta ka ROI ahịa email gị si arụ ọrụ - yana otu esi eme ka ọ rụọ ọrụ nke ọma.
Gịnị bụ Email Marketing ROI?
ROI ahịa email na-ekpuchi uru ị na-enweta na mkpọsa email gị ma e jiri ya tụnyere uru ị na-emefu na ha. Nke a bụ otu ị ga-esi mara mgbe mkpọsa gị dị irè, gụnyere ozi ziri ezi, ma na-adọta ụdị ndị na-azụ ahịa kwesịrị ekwesị - ma ọ bụ mgbe oge ruru ịkwụsị ma nwalee atụmatụ ọzọ bara uru karị.
Otu esi agbakọ ahịa ahịa email ROI?
Ị nwere ike gbakọọ ROI gị site na usoro dị mfe:
Ka anyị kwuo, ị na-emefu ihe dị ka $10,000 n'imezi igbe ozi gị nke ọma, na-edepụta ndebiri, na iziga ndị ọrụ gị ozi ịntanetị ahịa - nke a bụ Uru Emefuola gị ma ọ bụ ọnụọgụ ego ị na-etinye na ọwa ahịa email gị.
Ị na-enweta $300,000 n'aka ndị ahịa gbanwere site na mkpọsa gị n'ime otu ọnwa. Nke a bụ uru enwetara gị, ya bụ ego ị nwetara site na mgbasa ozi email gị n'ime otu oge. Ị nwetara isi ihe abụọ gị n'ebe ahụ, na anwansi nwere ike ịmalite ugbu a.
Yabụ, dị ka usoro ahụ gosipụtara gị, nkezi ROI gị sitere na mgbasa ozi ahịa gị bụ $ 29 maka dollar ọ bụla ị na-akwụ. Mụbaa ọnụ ọgụgụ ahụ site na 100. Ugbu a, ị maara na itinye $ 10,000 na mgbasa ozi ahịa wetara gị ọganihu 2900% nke mere ka ị nweta $ 300,000.
Kedu ihe na-eme Email Marketing ROI ka ọ dị mkpa?
Enwere ihe doro anya - ị ga-amarịrị na ị na-enweta karịa ka ị na-enye. Ịghọta nlọghachi gị na ntinye ego na-enye gị ohere:
Nweta onyonyo ziri ezi nke ndị zụrụ gị. Mgbe ị maara usoro ahịa ahịa email na-arụ ọrụ, ị maara ihe na-akpali atụmanya gị ma kpalie ha ime mkpebi ịzụrụ ihe. Yabụ, ị na-emehie ihe ole na ole mgbe ị na-achọpụta ndị na-azụ ahịa gị ma ọ bụ na-akwadebe ozi ahịa - wee belata oge dị mkpa maka atụmanya ịga n'ihu n'ọgbọ ahịa ahịa.
Mee ka okporo ụzọ webụsaịtị gị dịkwuo elu. Mgbe ịchọrọ ịnweta nleta ndị ọzọ na ebe nrụọrụ weebụ gị, SEO bụ ihe mbụ na-abata n'uche. Agbanyeghị, SEO na-ewe oge na ọtụtụ ọrụ tupu ịmalite nsonaazụ ịnya ụgbọ ala. Mgbasa ozi ịre ahịa email nwere ike iwebata ndị na-ege gị ntị lekwasịrị anya n'ọnụ ụzọ ịntanetị gị ngwa ngwa na ngwa ngwa site na ịnye onye nnata ọ bụla ihe bara uru, na-agba ha ume ka ha leba gị anya, na inyocha isi mmalite ozi gbasara gị na akara gị.
Kewaa ndị na-ege gị ntị. Ka ị na-aghọtakwu ndị ahịa gị, ọ na-adịrị gị mfe ịmepụta ọdịnaya ezubere iche ma nye otu ọ bụla ihe pụrụ iche. Ọ nwere ike ịgụnye ndị na-azụ ahịa ọhụrụ ma ọ bụ ndị debanyere aha ogologo oge, ma ị nwere ike họrọ ndị ahịa kacha anabata ma gbaa ndị na-azụ ahịa ume. Nke ahụ pụtara na ị ga-enwe ike wulite mgbanwe gị wee pịa-site na ọnụego enweghị mgbalị.
Chọpụta ohere nkeonwe karịa. Nhazi onwe ya dị mkpa nke ukwuu na uru na ihe ịga nke ọma nke mkpọsa ahịa email. Dabere na Smarter HQ, ihe dị ka 72% nke ndị ahịa na-eji ozi ịntanetị ahaziri onwe ha na-emekọ ihe.
Omume kacha mma maka ịbawanye ahịa ahịa email ROI
Edobeghị ROI gị na nkume, ọ bụ ya? Enwere ike ịhazi ya na ịbawanye ya site na ịme ihe kwesịrị ekwesị. Yabụ, ozugbo ị nwetara ROI zuru oke, ị nwere ike ịmalite ịrụ ọrụ n'ịzụlite ihe ịga nke ọma gị site n'ịchọpụta isi ihe kachasị mkpa nke mkpọsa ahịa email gị yana itinye uru karịa n'ime ha. Enwere ọtụtụ ụzọ isi mee ya, anyị ga-amụbakwa ụfọdụ ihe omume kacha ewu ewu.
Omume kacha mma 1: Jikwaa ike nke data
Ị nweghị ike ịgụ echiche nke ndị na-ege gị ntị - ma ọ bụrụ na telepathy ga-ekwe omume, anyị ka ga-akwadosi ya ike. Ihe niile ị chọrọ dị na ọdọ mmiri abụọ data. Ha abụọ dị gị ma gụnye nghọta bara uru na omume ndị atụmanya gị.
Data ndị ọbịa webụsaịtị. Ndị ọrụ na-abịa na ebe nrụọrụ weebụ gị ma na-amụ ibe ọ bụla nwere ike ịghọ ndị ahịa gị kacha mma - ọ bụrụhaala na ị jisiri ike wepụ ihe dọtara mmasị ha ma nye ha ihe ha chọrọ. Iji mee nke a, ị ga-enwerịrị ndepụta nke ebumnuche ha bụ isi, ọnụọgụ igwe mmadụ, na ihe ndị ha na-ebute ụzọ wee jiri ihe ọmụma ahụ hazie ndebiri gị. Ị nwere ike mụọ ndị ọbịa gị kwa ụbọchị site na Google Analytics. Ọ bụ ngwá ọrụ ga-enwerịrị onye ọ bụla chọrọ ịmụtakwu banyere ebe ndị ọbịa ha si bịa, nke ibe ha na-elekarị anya, ma ha bụ ndị ọbịa otu oge ma ọ bụ na-alọghachi kwa ụbọchị ma ọ bụ izu. Site na ozi dị otú ahụ dị n'aka gị, ị ga-aghọta nke ọma ime ka ndị na-ege gị ntị nwee mmasị na ịtụgharị ndị ọbịa ka ha bụrụ ndị debanyere aha.
Data mkpọsa. Elegharala ozi mkpọsa ndị gara aga nwere ike inye gị. Ngwa ụfọdụ na-egosi gị:
Ụdị ngwaọrụ eji ele ozi gị;
Mgbe ndị ọrụ kacha eme ihe mgbe gị na ozi-e gị na-akpakọrịta;
Kedu njikọ kpatara njikọ aka kacha mkpa;
Ọnụ ọgụgụ nke ndị ahịa na nwetara converted;
Nzụta nke ndị na-azụ ahịa gbanwere.
Data a na-enyere gị aka ịnye nleba anya arụmọrụ yana nkwurịta okwu siri ike n'etiti ndị nnata gị na gị. Nke a na-ewetara anyị omume ọzọ maka ịkwalite ahịa ahịa email ROI.
Omume kacha mma 2: bute nnukwu nnabata ụzọ
Ị nweghị ike ikwu maka ROI ruo mgbe ị nwere obi ike maka ịnapụta gị. Ọ gaghị ewu onwe ya; ịkwesịrị ịrụ ọrụ n'ọtụtụ ihe iji nweta arụmọrụ dị mma ma hụ mkpọsa gị na-akpata nsonaazụ. Ka igbe ozi na-ebuwanye ibu, ka ihe ịma aka ị ga-ezute karị.
Nnweta ozi-e bụ okwu ejiri kọwaa pasentị ozi-e na-adaba na igbe mbata ndị nnata gị. Ọ na-elekwasị anya na ozi-e enyere ikike ịbanye na igbe mbata ma onye nnata hụ ya. Nke a bụ kpọmkwem ihe kpatara nnyefe email ji dị mkpa mgbe ị na-enyocha arụmọrụ nke mkpọsa ahịa email gị.
Nnweta ozi-e nwere ọnọdụ dịgasị iche iche kwesịrị imezu tupu ị nwee ike ịgụta ozi gị dịka ezigara wee tinye aka n'ọganihu gị.
Aha onye zitere ya. Ọtụtụ ndị na-ezipụ ozi nwere ike izipu ozi-e, mana ọ bụ naanị ndị kacha kwesị ntụkwasị obi nwere ike ime ka ọ ruo onye nnata ha chọrọ. Ezigbo aha onye na-ezigara ya sitere na ngalaba ahụike yana adreesị IP a pụrụ ịdabere na ya, yana ọrụ igbe ozi na-adịgide adịgide, na nke ziri ezi.
Usoro nyocha. Mgbe ị na-enweta sava enweghị ike ikpebi ma ozi-e sitere na ngalaba egosiri na adreesị onye zitere ya, a na-eziga ozi ahụ na nchekwa spam. Nchọpụta ziri ezi chọrọ ndekọ DNS, dị ka ndekọ SPF, mbinye aka DKIM, na amụma DMRC. Ndekọ ndị ahụ na-enyere ndị nnata aka ịchọpụta ozi na-abata wee gosi na e mebighị ya ma ọ bụ zipu ya n'amaghị onye nwe ngalaba ahụ.
Ezi nnyefe email anaghị akwụsị na izipu ozi na igbe mbata ndị atụmanya gị. Ọ gụnyere ihe ndị a:
Ọnụ ọgụgụ dị ala nke bounces dị nro na nke siri ike. Mgbe ụfọdụ, n'oge na-adịghị mgbe izipu ozi-e gị, ị na-enweta ụfọdụ n'ime ha azụghachi, ma n'ihi nwa oge okwu, dị ka ihe nkesa nsogbu, imebi gị anọgidesi ike n'ezi ihe ma ọ bụ zuru ezu igbe ozi nnata (soft bounces), ma ọ bụ nsogbu na gị ndepụta nzipu ozi, ya bụ, na-eziga na adreesị ozi-e na-adịghị adị (ike bounces). Bounces dị nro na-achọ ka ị jiri nwayọ na-azọ ụkwụ nke ọma ka ị nọrọ na amara ISP gị, ebe bounces siri ike nwere ike imerụ aha gị dị ka onye na-ezipụ ozi. Iji nọgide na-enwe ezi nnyefe ozi-e, ị ga-ahụrịrị na e bounced email gị.
Ọtụtụ ozi ịntanetị gara ozugbo na igbe mbata. Ọ pụtara na ha anaghị abanye na nchekwa ahịhịa ma ọ bụ ọnyà spam na-ejide ha. Ihe ndị dị otú ahụ na-eme mgbe niile, ma ndị na-ezipụ ozi na-apụta ìhè nye ha, na-emebighị ikike ha.
Ọnụọgụ ozi-e/imekọrịta ozi-e mepere emepe. Kedu ihe bụ isi na a na-ebuga email gị ma ọ bụrụ na emepeghị ya? Ozi gị na-agbaso otu ebumnuche, ma mgbe ebumnobi a na-emezughị, ha anaghị eme mgbanwe ọ bụla na nnyefe gị. Ọrụ gị bụ ijide n'aka na atụmanya gị nwere ike ịhụ ozi-e gị yana na ha nwere mmasị n'ezie imeghe ha na ịgụ ọdịnaya ha.
Yabụ, ọ bụrụ na ịchọrọ ịkwalite ROI ahịa gị, jụọ onwe gị:
Enweela m usoro nkwenye email m dịka ebumnobi ahịa email m siri dị?
Enwere m mkpọsa ikpo ọkụ zuru oke?
Ndepụta izipu m ọ dị ọcha nke ọma?
Enwere m KPI niile n'anya m?
Enwere m ngwaọrụ maka ịlele ndetu ojii?
N'ezie, ọ na-ewe oge nweta elu deliverability. Nsonaazụ gị ugbu a nwere ike zuru oke iji nweta ezigbo ROI, mana ọ bụrụ na ịchọrọ ịga nke ọma, ngwa ngwa na sie ike, ị kwesịrị ileba anya na ọganihu gị, dị njikere ịmekwu ihe, na adala mbà na nke gị. kpoo ahụ ọkụ.
Omume 3 kacha mma: wulite ndepụta ozi-e lekwasịrị anya nke ukwuu
Atụmatụ a dị mkpa karịsịa maka azụmahịa na-azụmahịa (B2B) ahịa email. Mgbe ị na-ezigara mmadụ ozi, ịchọrọ ka ọ bụrụ onye ziri ezi, kwesịrị itinye oge na mgbalị gị n'ime, ma nwee ike irite uru n'ezie na onyinye gị. Ọ dịghị ihe dị njọ karịa izipu email mgbe email na onye ị kọwara dị ka onye na-eme mkpebi naanị iji chọpụta na ha anaghịzi arụ ọrụ na ụlọ ọrụ ezubere iche! Ka adreesị ndị na-adịghị mkpa dị na ndepụta gị, ọnụ ọgụgụ ntinye aka gị na-ebelata.
Iji na-anakọta data pụrụiche ọzọ ngwá ọrụ ọgụgụ isi ahịa na nyocha nke ọma na-enye gị ohere idobe ndepụta izipu gị dị ọcha ma baa uru. Na-emekarị, nke ahụ pụtara na ị ga-emerịrị nchọpụta tupu ire ere site na ịga na ibe LinkedIn nke ndị na-adị ka ndị na-eme mkpebi zuru oke, na-anakọta na nyochaa data kọntaktị. N'ezie, ọ bụghị onye ọ bụla nwere oge maka nke a - ihe dị mma na ị na-ezipụ ndị otu iji nyere gị aka.
Omume kacha mma 4: Jiri ihe karịrị otu ụdị na ụda
N'ikwu maka nhazi onwe, ka ị na-amatakwu maka akụkụ ọ bụla nke ndị na-ege gị ntị na-anata, ka ị na-aghọtakwu ụda ha na olu nhọrọ ha. Ụfọdụ n'ime atụmanya gị nwere ike ịrapara na ọdịnaya a na-ahụ anya, ebe ndị ọzọ ga-ahọrọ ụzọ laconic karịa. Ụfọdụ ndị ọrụ kwenyere na ọmụmụ ihe na ihe akaebe ọha na eze, ebe ndị ọzọ chọrọ nyocha zuru ezu na ọtụtụ ọdịnaya mmụta tupu ha ewere gị dị ka onye na-ere ahịa ziri ezi.
Ọdịnaya na-enye gị ohere ikwupụta onwe gị ma kwuo maka ọrụ gị nke ọma, yabụ egbula oge ịhapụ onwe gị ka ị rụọ ọrụ na ụdị ọdịnaya dị iche iche maka ụdị atụmanya gị, ndị debanyere aha na ndị ahịa gị. Ị dị mma ịga ogologo oge nke gị ndebiri emebila ụkpụrụ izisa ozi-e, nwere okwu mkpalite spam, ma ọ bụ jujue na njikọ na-adịghị mkpa.
Kedu akụkụ nke email gị kwesịrị ịbụ ahaziri onwe ya mgbe niile?
Ahịrị isiokwu. Nke a bụ ihe na-adọrọ mmasị ndị nnata niile na-elele igbe mbata ha. Ka ọ na-ekwe nkwa karịa, ohere nke imeghe email gị na-abawanye. Ahịrị isiokwu dị mkpa n'ezie bụ ọrụ nka: ọ naghị egbochi ya, ọ bụghị oke ahịa, ọ na-anwa gị na nkwa nke uru pụrụ iche na-anwa gị, na o doro anya na onye zitere email na ebumnuche ha.
njirimara onye izipu. Enyela ndị nnata gị naanị site na:name@gmail.com adreesị. Nye ha aha gị, aha gị, aha ụlọ ọrụ gị, na foto gị. N'agbanyeghị akụkụ ndị na-ege gị ntị lekwasịrị anya, ndị atụmanya gị ga-amarịrị ndị ha na-emekọ ihe. Mgbe adreesị ozi-e gị bụ ihe ha na-ahụ, ha nwere ike ịmalite iche na ha na-agwa bot okwu.
Nlere. Ị nwere ike ịhazi ọdịnaya gị iji zute mmasị onye ọrụ na agba ma ọ bụ mee ka ndebiri email gị chepụta karịa nke nwoke na nwanyị (karịsịa ma ọ bụrụ na ị na-ere ihe na-enye otu okike ma ọ bụ na-enye uru maka otu ìgwè). Mana kpachara anya, n'agbanyeghị - ọ bụghị ọrụ email niile na-akwado usoro HTML.
Ịkọ ọnụ na ọkachamara jargon. Mgbe ịmara gbasara ụlọ ọrụ na mpaghara ndị nnata gị na-arụ ọrụ na ya, ị ghọtara okwu okwu ahụ na-ada mgbịrịgba maka ha. Ya mere, ị nwere ike tinyekwuo nke ọma na ndebiri gị, na-egosi na ị nwere mmasị n'ezie na okwu ha kwa ụbọchị ma mara ihe ha na-ebute ụzọ.
Omume kacha mma 5: Mee ka mgbasa ozi gị dị mma maka mkpanaka
Ebe ọ bụ na anyị kwuru ihe ndị masịrị anyị, anyị kwesịrị ịnakwere afọ mkpanaka anyị bi na ya. Ndị mmadụ anaghị etinye aka na ekwentị ha na ngwa ha, na-eji ha dị ka ọnụ ụzọ mbata nke ozi, ọdịnaya, na ntụrụndụ. Ndị na-azụ ahịa na ndị ọchụnta ego na-eji ngwaọrụ ha zụta ihe, jikwaa usoro ọrụ ha, na, ee, lelee email. N'ihi ya, ọ bụrụ na enweghị ike ịlele ozi-e gị site na smartphone, ị na-atụfu ọtụtụ ndị nwere ike ịzụrụ ya. Nkezi onye ọrụ bụ ihe ọ bụla ma ọ bụrụ na ọ nwere ndidi - ọ bụrụ na ọ na-ewe ha ihe karịrị 3 sekọnd iji bulite ozi-e ma ọ bụ ọ bụrụ na ịgụ ya erughị afọ ojuju, ha ga-emechi ya ozugbo wee gaa na ozi ndị ọzọ kachasị mma.
Iji jide n'aka na ozi gị bụ enyi na enyi mkpanaka, ka onye nrụpụta webụ gị na onye nduzi nka leba anya na ha, hụ ka a ga-esi emeziwanye ha ma mee ka obi dị ndị na-ege gị ntị ụtọ.
Omume kacha mma 6: Jiri akpaaka ahịa ahịa email
Omume a dị mkpa maka ndị na-azụ ahịa na-azụ ahịa (B2C) Atụmatụ ahịa, karịsịa ugbu a mgbe e-azụmahịa na-arị elu. Nke a kpatara ya akụrụngwa ahịa Ọtụtụ ndị na-enye ọrụ email na-enyekarị atụmatụ (ESP). Atụmatụ ndị a na-eme ka o kwe omume:
Hazie ozi ịntanetị. Ike agwụla gị ịnọ ọdụ izipu akwụkwọ akụkọ na ozi nkwado n'oge kwesịrị ekwesị? Ikwesighi ime ya. Ntọala akpaaka na-enye gị ohere ịhọrọ oghere oge ziri ezi, tinye ndepụta kọntaktị, wee zuo ike, ịmara na ozi ga-erute igbe ozi ndị nnata gị n'egbughị oge.
Hazie ozi ịntanetị azụmahịa. Njirimara akpaaka nke ahịa email soro akụkọ ịzụrụ ndị ọrụ wee wepụta akwụkwọ ọnụahịa, ozi-e nkwenye, ọkwa na ọkwa na-eme ka onye ọ bụla zụrụ azụ kechie mkpebi onye zụrụ ya ngwa ngwa ma ọ bụ gaa n'ihu na webụsaịtị na-emekọrịta ihe.
Zipụ amamọkwa ụgbọ ibu agbahapụla. Ụdị ozi a bụ ngwá ọrụ mweghachi dị ike nke na-enyere gị aka iweghachite ndị ọbịa saịtị ndị na-emeghị uche ha. A na-akpalite mgbe ọ bụla agbakwunyere ihe na ụgbọ ala mebere mana ewereghị ya n'ihu, ozi ịntanetị agbahapụla na-akpali ndị ọrụ ime ihe wee gosi na nhọrọ ha dị mkpa.
Email Marketing ROI bụ KPI bara uru na njikwa nke nwere ike igosi gị ọganihu gị na ụzọ ahịa ahịa email - yana ọtụtụ nsogbu dị n'ihu. Ọ na-ahapụ gị ka ị kesaa ego gị n'etiti ọwa ịre ahịa nke ọma dị ka o kwere mee ma na-agba gị ume ka ị gbalịa ọbụna karị.
Anyị na-atụ anya na omume ndị anyị depụtara ebe a ga-enyere gị aka imezu ebumnuche ịzụ ahịa gị ma kpalie gị ịgafe nsonaazụ gị ugbu a. Iji kwalite mgbasa ozi gị yana hụ na ọ nweghị nkọwa gafeworo gị, anyị na-atụ aro ka ijikọta omume gị N'ime folda. Ọ bụ ikpo okwu na-ejikọta nnwale nnabata email yana ndozi nsogbu spam, nyocha ntinye oge, njikọta na isi ESPs, na ndị ọzọ.
Jisie, ka ike nke ROI nọnyere gị!
Hazie ngosi ngosi nchekwa
ngosi: Martech Zone nwere mmekorita ya na N'ime folda ma anyị na-eji njikọ ntụaka anyị n'ime akụkọ a.
Tags: ọkwa ụgbọ ịzụ ahịa agbahapụrụNyochaemail b2bb2cb2c emaildata mkpọsannapụtaemailemail pịa-siteemail ctrozi nnapụta emailntinye aka na emailndepụta emailemail Marketingemail mepeenzisa ozi emailemail nkeonwenhazi oge emailemail nkewaụdị emailemail isiokwu akaraemail ndebiriụda emailihe ngosi emailikpo ọkụ emailspike bouncesntinye igbeip ọkụakụrụngwa ahịaemail mkpanakalaghachi azụmaahịaROIire ahiaahia ahiahazie ozi ịntanetịnjirimara onye izipuziri ozibounces dị nroozi ịntanetị azụmahịaonye ọbịa data
Desktọpụ Ọfịs Ụlọ M na Nkà na ụzụ maka ịdekọ vidiyo, nnọkọ na pọdkastị